JINGHPAW KASA: တောင်နီကျေးရွာကို ကေအိုင်အေမှ သိမ်းပိုက် ထိမ်းချုပ်နိုင်
တောင်နီကျေးရွာကို ကေအိုင်အေမှ သိမ်းပိုက် ထိမ်းချုပ်နိုင်
ဒီဇင်ဘာ (၃၀) တနင်္ဂနွေ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော မိုးကောင်း - မိုးညှင်း ရထားလမ်းပေါ်ရှိ တောင်နီကျေးရွာကို ဒီဇင်ဘာ (၂၉) ရက်နေ့ည တွင် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၅) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ သိမ်းပိုက် ထိမ်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ယခုအခါ ဗမာအစိုးရသည် ကချင်လူမျိုးများအပေါ် အမျိုးတုံး စစ်ကို လက်တွေ့ဆင်နွဲနေပြီဖြစ်သောကြောင့် ပြည်တွင်းရှိ ကချင်လူမျိုးများ အားလုံး ဗမာနယ်ချဲ့ အစိုးရကို ရောက်ရာအရပ်မှ တိုက်ခိုက်တွန်းလှန် ရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မိမိကိုယ်လုံခြုံရေးအတွက် အထူးသတိရှိကြရန် တာဝန်ရှိသူများမှ သတိပေး ပြောကြားလာကြောင်း သိရှိရပါသည်။
KIA soldiers from (5) battalion occupied Taung Ni village which is on the way of Mogawng and Monyin rail road, it is under KIA’s (2nd) Brigade area on 29th December, according to the KIA front line officer report. Moreover, KIA alarmed all the Kachin ethnic people to insist in wherever the invader Burmese Government military because the Burmese Government made genocide war on the Kachin ethnic people.
n dai myen n gyi ka comment hpe naw shaw kau ya rit...nau zai taw nga ai...
fucker fucker lagyi .son of the bitch.we say rightly ...if u don't do .you no need to pain...
ဟဲဟဲ ....အနာမှာတုတ်ကျသွားတော့ မခံစားနိူင်၇ှာဘူထင်တယ်။ဒါအစဘဲ၇ှိသေးတယ်နော့။အမျိုးတုံး သွားမယ် ကချင်ကို လာစမ်းလို့
အမျိုး တုံး မှာ မင်း တို့ စောက် ဗမာ တွေ ကွ
ကချင်စောက် ပေါ ကြီးတွေ မဟုတ်က ဟုတ်က တွေ လုပ် ပြီး ကိုယ့် ဘာသာ အဟုတ် ထင်နေတယ် ။ ကိုယ့် ပြည်သူ တွေ ရဲ့ အခြေအနေ ကို လည်း ကိုယ်မသိတတ် ဘူး ။ စစ်ဖြစ်တာ နှ နှစ် ကျော်နေပြီ ။ ကြာရင် လဲ ကိုယ့် ပြည် နယ် ကိုယ့် လူမျိုး လဲ ဖွတ်တွေ ဖြစ်တော့ မယ် ။ အခု ထက်ထိ တော ထဲမှာ သေနတ် ကိုင် ပြီး ကျေ နပ်နေ ကြတုန်း။ ကရင် တွေ ရှမ်း တွေ လောက် တောင်မ သိ တတ်ဘူး ။ ကချင် ပြည်နယ် တခုလုံး မီး တောက်ပြီး တမျိုး ဒုက္ခ ရောက်နေတာ တောင် ကိုယ့် လူမျိုး ကိုယ် မသိတတ်ဘူး ။ ခွေး စိန်ဓာတ် နဲ့ KIA တွေ ။
KIA ခွေး သူတောင်းစား မျိုး ။ နင် တို့ ကြောင့် မို့ ကချင်ပြည် သူတွေရဲ့ ဘဝ က ကြာလေ ဆိုးလေ ဘဲ ။ ငါလိုးမ ခွေး မျိုး တွေ မြန်မြန် သေ မှ ကောင်း မှာ ။
ဗမာတောင်ရိုလျောက်ကချင်မြစ်ရေသောက်ကချင်ကလေးနန်းထိုင်မှအေးတဲ့ရှေ့လူကြီးသဘောင်စကားဧကံမုချအခုဖြစ်တော့မည်ဟေ့အခုဖြစ်တော့မည် စိတ်မရှိကြပါနဲ့ကချင်အုပ်ချုပ်ရင်ဗမာလောက်တော့မဆိုးစေရပါဘူးကွာ မယုံမရှိနဲ့ဘုရားကတို့ကချင်ကိုအလှည့်ပေးသနားတော်မူပြီ ဘုရားသခင်မလိမ်မိုးမလိမ်မာပြောဆိုဆဲဆိုးနေသော်ဗမာcommentရေးသူများအပေါ်ခွင့်လွတ်ပေးတော်မူပါသူပြောသော်အရာအားလုံးသူထံသို့သာပြန်မရောက်ရှိပါစေ
သတောင်းစားဆိုတာ ကချင်မှာမရှိဘူး .. ဘယ်လောက်ငတ်ငတ် တောင်းစားတဲ့ထဲမှာ ကချင်မပါဘူး .. မင်းတို့ဗမာတွေက မှ သူတောင်းစားမျိုးတွေ
စားစရာမရှိလဲပြောပေါ့ ကချင်ပြည်သူတွေကျွေးမှာ ပေါ့ .. နေစရာမရှိလည်း နေစရာပေးမှာ ပေါ့ ကချင်ပြည်နယ်က အကျယ်ကြီးဟာ .. ထမင်းကျွေးတဲ့ အိမ်ရှင်တွေကို တော့ ကျေးဇူးမတင်လည်းရတယ် မစော်ကားပါနဲ့ ..
အချို့့သော အာ ဏာပြန်သိမ်းလိုသော စစ် အာ ဏာရှင် နှ့င် ၎င်းအပေါင်းအပါ တို့က သွေးထိုးလှုူံဆော် ပြသ၁နာ ကိုဖနတီးလျှက် ရှိပါသည်
ဗမာ အပါအ၀င် မည်သည့် လူမျိုးစုကိုမှ ရန်လိုမုန်း တီးခြင်းမရှိပါ
မိမိလူမျိုးနှင့် ဒေသကိုဖိနှပ်ချုပ်ချယ် လူ့အခွင့်အရေးများ ချိုးဖောက် လူမျိုးခွဲခြားရေး ၀ါဒကျင့်သုံးနေ သောထိုလက်တဆုပ်စာ စစ်အာ ဏာရှင် ကျူးကျော်ရန်စသော လက်နက်အားကိုးဝါဒီများကိုသာ ဆန့်ကျင် ခုခံကာကွယ်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်
အမည်နာမ ဖော်ပြရန် မလိုသော web site တွင် နှစ်ဖက်စလုံးအား ထိခိုက်စေသော
စကားလုံးများကို အာဏာရှင်လက်ပါးစေတို့က ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်
ဟဲဟဲ ......ငါလိုးမသာ:ဗမာစစ်ခွေးအနာမှာတုတ်ကျသွားတော့ ဟာ: ဟာ:..
ဗမာစစ်ခွေး mother fucker
Ah Bawk said...
ငါတို့ ကချင်ပြည်က မြစ်ဖျားခံ တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ရေကိုသောက်ပြီးတော့
grai na gabu sai lu dai rai nkai ka myen chyasi hpe comments ngwi ka hkra yawng chyawm gasat ga
အပေါ်က kia မျိုးပြုတ်မှဗမာပြည်ငြိမ်းချမ်းမယ်ဆိုဒါ မဖြစ် နှိုင်ဘူး။အောက်ဗမာ ပြည်မှာkia စစ်တပ်မရှိဘာဘူး။ဗမာပြည်မအေးချမ်းဒါက ပြည်သူတွေကိုအဓမ္မဖိနှိပ်လို့ပါ။kiaနှဲ့ မဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။ကချင်ပြည်မှာလဲ ဗမာစစ်တပ်က kiaဌာနချုပ်ကိုလာချဒါပါ။kiaက မြောက်ပိုင်းတိုင်းကိုချဒါမဟုတ်ဘာဘူး။အခုစစ်ကkia ကုန်သွားလဲ new generation တွေကတာဝန်ယူသွားမှာပါ။အစိုးရ ကသူပုန်ဆိုတိုင်းkiaကသူပုန်မဟုတ်ဘာဘူး။kiaဖျက်သိမ်းရေး or ဗမာစစ်တပ်ကချင်ပြည်နယ်မှအပြီးအပိုင်ထွက်ခွာရေးကိုပြည်သူများ မဲခွဲသင့်ပါတယ်။
ဟေ့ kia တွေ မပြေးသေးဖူးလား
ဟေကောင်းတွေဘာမှပြောမနေနဲ့မင်းတို့ကချင်လောက် အပ့်တ ကြီးတာမရှိဘူးငါ့လူမျိုးငါ့အမျိုးဆို အေလိုးအေလိုးနဲ့နေတာသူ့ပထွေးငါတို့ဗမာတွေဆို မညယ်=မညယ် နဲ့ ခွေးသူတောင်းစားတွေမင်းတို့ကိုသာဒီကချင်ပြည်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ငါတို့ကျံတိုင်းရင်းသားအားလုံးကိုလိုနီခေတ်ပြန်ရောက်မှာသေချာတယ် မင်းအမျိုးမှလူထင်တဲ့ကောင်မြန်မြန်သာမျိုးတုန်းအောင်
70 ကျော် အင် အား နဲ့၅ ,ယောက် ၆ ယောက် သွား တိုက် တယ် ဆို တော့ တော်ပါ ပေ တယ် kia ။
မင်းတို့ကပြောရတယ်ရှိသေးဆင်ရဲလို့လမ်းဘေးမှာတောင်းစားတာတယောက်မှမရှိဘူးဟုတ်လါး မတောင်းစားဘူးခိုးစားတာ ကချင်မတွေဆိုရင်အောက်သားကိုမရ ရအောင်ယူအောက်သားခမျာမှာတော့အလွယ်မက်ငတ် ကြီးကြပြီးအဖေအမေကိုအလုပ်သွားလုပ်မယ်ဆိုပြီအထက်ပိုင်းရောက်တမျိုးလုံးမယားတော်တာနဲ့တွေ့တော့အဖေလဲမေ့ အမေလဲဘယ်နေမှန်းမသိအလုပ်ကိုင်ကောင်းလို့ဝင်ငွေဖြောင့်ရင်အိတ်လေးဖေါင်းလါတော့ ဟိုယောက်ဖ ဒီကအဂူး တခါ ဟိုနားအခေါင် တဲ့ဒါနဲ့ကချင်နွားဖြစ်ရော အိတ်ကဒ်လေးလဲရော့ မိန်းကအလှပြင် အသစ်ရှာဘို့တပြင်ပြင်နဲအဲဒီတော့ဘယ်လိုလုပ် သူတောင်းစားရှိမှာလဲပြောပါအုံး
လီးနဲ့တော့မထိုးပါနဲ့ဖင် လိုးရင် လိုးရင် လိုးလိုက် ပါkiaမ တွေ
nanda steven said...
မင်းအောင်လိူင်ရေသန်းရွှေခိုင်းတိုင်းလိုက်လုပ်မနေနဲ့အလကားကိုယ့်တပ်သားတွေသေကုန်ပြီ ခင်ညွန့်နဲ့သွားတိုင်ပင်လေ မင်းအားနေတာပဲ
မင်းခုတော့အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းဖြစ်ပြီ လေ ယာဉ် ၆ စီး နဲ့ သွား ချ လည်း
လိုင် ဇာမသိမ်း နိုင် ကမ္ဘာ က မင်းကို ဘယ် လိုမြင် မယ် ထင် လဲ စောက် ပေါ
ကြီး ဖြစ် လို့ ပြည် တွင်း စစ် ပါ ဆို ဓါတု လက်နက်တွေ လျှောက် သုံး မင်း ကို ဘယ် သူ သင် ပေး တာ လဲ မင်း သမိုင်း မလှ တော့ ဘူး မင်း အောင် လှိုင်
ဘုန်းကြီး ကို တောင် လုပ် ရဲ တယ် မင်း က သန်း ရွှေ ထက် ဆိုး နေပြီ ဟူ့း့ 